အာရုံခံ ကိရိယာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ရူပဗေဒသဘောတရားဖြင့် ရေတွက်မှုကို အချက်ပြစနစ်အဖြင့် ပြောင်းလဲပေးသော ပြောင်းလဲမှုစနစ် ၊သို
အာရုံခံကိရိယာ (Sensor) ဆိုသည်ကို ကျယ်ပြန့်စွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမည် ဆိုလျှင် အဖြစ်အပျက်များကို သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် အပြောင်းအလဲကို ထောက်လှမ်းသိရှိပြီး အခြားသော အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာ (အများအားဖြင့် ကွန်ပျူတာ ပရိုဆက်ဆာ) သို့ သတင်းအချက်အလက်ကို ပေးပို့ပေးသော ကိရိယာ၊ အစိတ်အပိုင်း၊ စက် သို့မဟုတ် စနစ်ခွဲ တစ်ခု ကို အာရုံခံကိရိယာဟု ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
အလင်းရောင်သုံး အာရုံခံကိရိယာ အမျိုးမျိုး
အာရုံခံကိရိယာများကို နေ့စဉ်သုံး အရာဝတ္ထုများတွင် အသုံးပြုကြပြီး နှိပ်လိုက်သည်ကို သိရှိသော ဓာတ်လှေကား ခလုပ် နှင့် ထိလိုက်သည်နှင့် မီးမှိန်သွား ခြင်း သို့မဟုတ် လင်းသွားခြင်း ဖြစ်သော မီးလုံးများ အပြင် လူအများစု သတိမမူမိသည့် မရေမတွက်နိုင်သော အသုံးပြုမှုများ အမြောက်အမြားပင် ရှိသည်။ မိုက်ခရိုစက်များ တိုးတက်လာခြင်း နှင့် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သော မိုက်ခရို ကွန်ထရိုလာ ပလက်ဖောင်းများ တိုးတက်လာခြင်းတို့ကြောင့် အာရုံခံ ကိရိယာကို အသုံးပြုခြင်းသည် သမာရိုးကျ တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်သော အပူချိန်၊ ဖိအား နှင့် စီးဆင်းမှုအားကို တိုင်းတာခြင်းတို့ထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်။
↑ Bennett၊ S. (1993)။ A History of Control Engineering 1930–1955။ London: Peter Peregrinus Ltd. on behalf of the Institution of Electrical Engineers။ ISBN 978-0-86341-280-6The source states "controls" rather than "sensors", so its applicability is assumed. Many units are derived from the basic measurements to which it refers, such asaliquid's level measured byadifferential pressure sensor.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာရုံခံ_ကိရိယာ&oldid=705544" မှ ရယူရန်
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။